မနကျခငျးအိပျယာနိုးနိုးခငျြး လုံးဝ (လုံးဝ) မလုပျသငျ့တဲ့ အရာမြား – Cele Lover
မနကျမိုးလငျး အိပျရာထရတဲ့အခြိနျဟာ လူအတျောမြားမြားအတှကျတော့ တကယျ့ကို အဆိုးရှားဆုံးအခြိနျပါပဲ ။တဈနတေ့ဈနကွေ့ားနရေတဲ့ Alarms သံကိုမုနျးနတေဲ့သူ ဘယျလောကျမြားပွီလဲ ။ Alarms သံကွားတာနဲ့ နာရီကို ကိုငျပေါငျပွီး စောငျအောကျထဲပွနျဝငျခငျြစိတျပေါကျနတော ဘယျလောကျမြားခဲ့ပွီလဲဆိုတာ ကိုယျတိုငျသိကွမှာပါ ။ဒါပမေယျ့လညျး တာဝနျ နဲ့ ဝတ်တရားတှရှေိတဲ့အတှကျ မဖွဈမနထေရတာပဲ ။
ဒီလိုမြိုး စိတျပကျြစရာအခွအေနမြေိုးမှာ ဘယျလိုကိစ်စတှကေို မပွုလုပျပဲ ရှောငျရှားသငျ့သလဲ.? ၁။ Snooze – (Alarm ပေးထားတာကို Snooze လုပျပဈခွငျးကိုဆိုလိုသညျ) နောကျငါးမိနဈလောကျ…..ဆိုတာဟာ အတျောကို ဆိုးပါတယျ ။အိပျရာနိုးနိုးခငျြး ရမေိုးခြိုးတာမြိုး ခကျြခငျြးလုပျဖို့မလိုအပျပမေယျ့ ပှငျ့နတေဲ့ မကျြလုံးကိုတော့ ပွနျမမှိတျလိုကျသငျ့ပါဘူး ။တကယျလို့ Snooze ခလုတျကို နှိပျပွီး ပွနျအိပျပြျောသှားရငျတော့ သငျဟာ အစကနပွေနျအိပျသလိုဖွဈသှားပါလိမျ့မယျ ။အဲ့ဒီအခြိနျမှာ Alarm ထမွညျခဲ့မယျဆိုရငျ ဒေါသတှအေကွီးအကယျြထှကျလာပါလိမျ့မယျ ။
၂။ ငွိမျမနပေါနဲ့ – ခုနကပွောသလိုပဲ အိပျရာနိုးနိုးခငျြး ရသှေားခြိုးဖို့မလိုပမေယျ့ အနညျးဆုံးတော့ အိပျရာပျေါက ထထိုငျတာမြိုး ၊ အပငျြးဆနျ့တာမြိုးပွုလုပျသငျ့ပါတယျ ။အိပျရာနိုးနိုးခငျြး အပငျြးဆနျ့တာဟာ တဈနတေ့ာလုပျငနျးခှငျမှာ ပိုမိုယုံကွညျမှုရှိလာစတေယျလို့လညျး ဟားဗကျမှ စိတျပညာရှငျ Amy Cuddy ကပွောထားပါတယျ ။ ဖုနျးမကွညျ့ပါနဲ့ – မနကျမိုးလငျးလငျးခငျြး ဖုနျးကွညျ့တာမြိုးလုံးဝမပွုလုပျပါနဲ့ ။အလှနျကွညျ့ခငျြနရေငျတောငျမှ ကိုယျလုပျစရာရှိတာတှလေုပျပွီးမှကွညျ့ပါ ။စိတျပညာရှငျတှအေပွောအရ အိပျရာနိုးနိုးခငျြး ဖုနျးကွညျ့ခွငျးဟာ စိတျကနျြးမာရေးကို ထိခိုကျလာနိုငျတယျလို့ သိထားရပါတယျ ။
၃။ အမှောငျထဲမှာမနပေါနဲ့ – အိပျရာထတဲ့အခါ မကျြစိက အလငျးရောငျကို ကွညျ့ဖို့ ကငျြ့သားမရသေးပါဘူး ။ဒါကွောငျ့ မီးပိတျထားပွီး ကိုယျလုပျစရာရှိတာကိုလုပျကွလရှေိ့ပါတယျ ။ဒါပမေယျ့ ခန်ဓာကိုယျက အလငျးအမှောငျကိုတုံ့ပွနျအား အရမျးကို ကောငျးလှနျးတဲ့အတှကျ အမှောငျထဲမှာပွငျဆငျနတေဲ့အခါ ညဘကျယူဆသှားပါတယျ။ ခန်ဓာကိုယျက ညဘကျလို့ယူဆလိုကျတဲ့အခါမှာ နရေငျးထိုငျရငျး နုံးခြိလာသလိုခံစားရပါလိမျ့မယျ ။ဒါကွောငျ့ မနကျမိုးလငျးတဲ့အခြိနျမှာ လိုကျကာတှဖှေငျ့ပွီးတော့ အလငျးရောငျအောကျမှာပွငျဆငျတာ အကောငျးဆုံးပါပဲ ။
မနက်ခင်းအိပ်ယာနိုးနိုးချင်း လုံးဝ (လုံးဝ) မလုပ်သင့်တဲ့ အရာများ
မနက်မိုးလင်း အိပ်ရာထရတဲ့အချိန်ဟာ လူအတော်များများအတွက်တော့ တကယ့်ကို အဆိုးရွားဆုံးအချိန်ပါပဲ ။တစ်နေ့တစ်နေ့ကြားနေရတဲ့ Alarms သံကိုမုန်းနေတဲ့သူ ဘယ်လောက်များပြီလဲ ။ Alarms သံကြားတာနဲ့ နာရီကို ကိုင်ပေါင်ပြီး စောင်အောက်ထဲပြန်ဝင်ချင်စိတ်ပေါက်နေတာ ဘယ်လောက်များခဲ့ပြီလဲဆိုတာ ကိုယ်တိုင်သိကြမှာပါ ။ဒါပေမယ့်လည်း တာဝန် နဲ့ ဝတ္တရားတွေရှိတဲ့အတွက် မဖြစ်မနေထရတာပဲ ။
ဒီလိုမျိုး စိတ်ပျက်စရာအခြေအနေမျိုးမှာ ဘယ်လိုကိစ္စတွေကို မပြုလုပ်ပဲ ရှောင်ရှားသင့်သလဲ.? ၁။ Snooze – (Alarm ပေးထားတာကို Snooze လုပ်ပစ်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်) နောက်ငါးမိနစ်လောက်…..ဆိုတာဟာ အတော်ကို ဆိုးပါတယ် ။အိပ်ရာနိုးနိုးချင်း ရေမိုးချိုးတာမျိုး ချက်ချင်းလုပ်ဖို့မလိုအပ်ပေမယ့် ပွင့်နေတဲ့ မျက်လုံးကိုတော့ ပြန်မမှိတ်လိုက်သင့်ပါဘူး ။တကယ်လို့ Snooze ခလုတ်ကို နှိပ်ပြီး ပြန်အိပ်ပျော်သွားရင်တော့ သင်ဟာ အစကနေပြန်အိပ်သလိုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် ။အဲ့ဒီအချိန်မှာ Alarm ထမြည်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒေါသတွေအကြီးအကျယ်ထွက်လာပါလိမ့်မယ် ။
၂။ ငြိမ်မနေပါနဲ့ – ခုနကပြောသလိုပဲ အိပ်ရာနိုးနိုးချင်း ရေသွားချိုးဖို့မလိုပေမယ့် အနည်းဆုံးတော့ အိပ်ရာပေါ်က ထထိုင်တာမျိုး ၊ အပျင်းဆန့်တာမျိုးပြုလုပ်သင့်ပါတယ် ။အိပ်ရာနိုးနိုးချင်း အပျင်းဆန့်တာဟာ တစ်နေ့တာလုပ်ငန်းခွင်မှာ ပိုမိုယုံကြည်မှုရှိလာစေတယ်လို့လည်း ဟားဗက်မှ စိတ်ပညာရှင် Amy Cuddy ကပြောထားပါတယ် ။ ဖုန်းမကြည့်ပါနဲ့ – မနက်မိုးလင်းလင်းချင်း ဖုန်းကြည့်တာမျိုးလုံးဝမပြုလုပ်ပါနဲ့ ။အလွန်ကြည့်ချင်နေရင်တောင်မှ ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာတွေလုပ်ပြီးမှကြည့်ပါ ။စိတ်ပညာရှင်တွေအပြောအရ အိပ်ရာနိုးနိုးချင်း ဖုန်းကြည့်ခြင်းဟာ စိတ်ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်လာနိုင်တယ်လို့ သိထားရပါတယ် ။
၃။ အမှောင်ထဲမှာမနေပါနဲ့ – အိပ်ရာထတဲ့အခါ မျက်စိက အလင်းရောင်ကို ကြည့်ဖို့ ကျင့်သားမရသေးပါဘူး ။ဒါကြောင့် မီးပိတ်ထားပြီး ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာကိုလုပ်ကြလေ့ရှိပါတယ် ။ဒါပေမယ့် ခန္ဓာကိုယ်က အလင်းအမှောင်ကိုတုံ့ပြန်အား အရမ်းကို ကောင်းလွန်းတဲ့အတွက် အမှောင်ထဲမှာပြင်ဆင်နေတဲ့အခါ ညဘက်ယူဆသွားပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်က ညဘက်လို့ယူဆလိုက်တဲ့အခါမှာ နေရင်းထိုင်ရင်း နုံးချိလာသလိုခံစားရပါလိမ့်မယ် ။ဒါကြောင့် မနက်မိုးလင်းတဲ့အချိန်မှာ လိုက်ကာတွေဖွင့်ပြီးတော့ အလင်းရောင်အောက်မှာပြင်ဆင်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ ။
Previous Article ကိုယျခငျြးစာတရားတှလှေိုငျလှိုငျပွောပွီး စာနာစိတျမရှိ တဲ့ ပတျဝနျးကငျြကို ရှောငျတဲ့အကွောငျး ပွောလာတဲ့ ထူး အယျလငျး
Next Article အိမျက ခွံလေးထဲတှငျ ဟငျးသီး ဟငျးရှကျ စိုကျပြိုးရငျး အားလပျ ရကျကို တနျဖိုး ရှိစှာ ဖွတျသနျး နတေဲ့ ဝဠေုကြျော